SAREEN AMMAS JALQABDE: Gaafa WBOn badu atis akka hin jirre quba qabaadhu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsSAREEN AMMAS JALQABDE: Gaafa WBOn badu atis akka hin jirre quba qabaadhu.
SAREEN AMMAS JALQABDE: Gaafa WBOn badu atis akka hin jirre quba qabaadhu.
SAREEN AMMAS JALQABDE : Gaafa WBOn badu atis akka hin jirre quba qabaadhu.
Gartuu ATM kan taate Taayyee Danda’aa Ibsa laatte jedhu har’a. “ABOn gaafa dhukkaafni barbaachisu eessa ture” jette jedhan. Yoo ati ija keef arguu dhabde WBOn hin jiru jechuun hin danda’amu. Waggaa kudhan maqaa ABOn hidhamuun kee Maaliif akka ta’e atuu beekta.
Basaastuu taatee hidhamte dhiirri maqaa ABOn hidhame Amma WBO hoogganaa jira Jaal.Marroon ati Xaawulaa turte Ragaa ba’uuf warra Maqaa ABOn hidhame irratti.
Ibsa kennuun WBO irraas hin hiiktu Maqaa balleessuunis siif hin milkaa’u! Gaafa WBOn badu atis akka hin jirre quba qabaadhu.
Obbo Lammaa Margasaa Yaadan yaa mo’annnuu= 200 ol tahan kijibdoota oraalii hedduu FB ishee faana taarresseera! – https://t.co/bDmnOs73X1 pic.twitter.com/WASfJRCvDt
— Kichuu (@kichuu24) December 28, 2018
ይድረስ ለታዬ ደንደዓ: እየገደላቹን የነበራቹ ሰዎች የት ነበራቹ ብላቹ ለመጠየቅ ምን ሞራል አላቹ ? – https://t.co/wzEsaXO22h pic.twitter.com/JdC1cpL7dY
Uummata Booranaa Mooyyalerraa buqqa’eef sagalee haa taanu, haa gargaarus!
Dubbii jaarsolii biyyaa, abbootii amantaafi Abbootii Gadaa
1. Biyya kana keessatti jaarsi biyyaa kabajaa qabaateellee hin beeku. Jaarsi biyyaa silaa dhimma Biyyaa keessaa qooda qabaatee bakka wal dhabdeen jiru jidduu deemee rakkoo fura. Jaarsi biyyaa imaanaa uummataafi dhugaa harkaa qaba ture akka dhugeeffannoo Oromootti. Jaarsi biyyaa abbaa seenaafi utubaa biyyaati. Biyya kana keessatti garuu jaarsi biyyaa gaafa rakkoo uummataa alatti dhiibamee gaafa rakkoo mootummaa barbaadama. Jaarsi biyyaa biyya kanatti gaafa sabni hacuuxcamu waliin hacuuccamee gaafa sabni falmatummoo jaarsummaa uummatatti ergama.
Kabajaan jaarsi biyyaa mootummaa biraa qabu gaafa rakkoon isa mudatu qofa mullata.
2. Abbootii Amantaa
Qabsoo Bilisummaa Oromoo bifa adda addaan geggeeffamaa ture itti dhiyeenyaan kan yeroo dhiyoo argaa dhaga’aa turre. Caasaan mootummaa mana amantaa biyya kanaa keessatti bal’inaan diriirfamee yommuu mullatu argina. Mootummaan akka dabballeetti itti fayyadamuun uummata keenya burjaajessaafi duubatti harkisaa ture. Abbootiin amantaa gaafa uummanni Oromoo obsa dhabee, falas dhabee daandiitti ba’ee falmatu, gaafa xiqqaafi guddaan biyya ofiif du’u abbootii amantaa hedduun callisanii ilaalaa turan. Gaafa humni uummataa jabaatee mootummaa yaaddessu garuu bakka hiriirri geggeeffamutti ba’uudhaan uummanni akka falmachuu dhiisu dhiibbaa godhu. Kan gaafa qe’een Oromoo golgolaa’ee, qabeenyi Oromoo saamamee, diinni xiyyeeffatee itti marsu “yaa Oromoo qe’een keessan badee, daa’imni keessan dhumtee, kabajaa dhabdanii ka’aa falmadhaa” utuu hin jedhiin, gaafa uummanni falmatu garuu carraa argataniin waamicha mootummaan godheen uummataafi TVtti ba’anii “mootummaa keenya waliin mari’annee rakkoo furra; tasgabbaa’aa” jedhanii afaan amantiifi afaan dabballummaan uummata kadhatu. (Hunda miti)
3. Abbootii Gadaa
Jalqaba Oromoon Sirna Gadaan bulaa ture malee amma ittiin bulaa hin jiru. Bakka sirni Gadaa garbummaa jala jirutti Abbaan Gadaas hin jiru; yoo jiraates garboomee jiraata. Abbaa Gadaa yeroo ammaa kan muudu duudhaafi sirna bulchiinsa Gadaan utuu hin taane, mootummaatu muudaa ture. Abbaan Gadaa sadarkaa maqaatti jiru kunis afaan mootummaa ta’ee haasa’a.
Akka Sirna Gadaatti aangoo guutuu kan qabu uummata waliin Abbaa Gadaadha. Siyaasni, dinagdeen, hawaasummaan, amantiifi kkf harka Abbaa Gadaa jira akka Sirna Gadaatti. Garuu Abbaan Gadaa ammaa aangoo tokkollee kan ittiin waa murteessu hin qabu. Abbootiin Gadaas akka uummanni mootummaa irratti hin kaaneef jiraatu hedduun.
Tibba kana Abbootiin Gadaa, Abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa “wal dhabdee Lixa Oromiyaatti uumame furuu” maqaa jedhuun gara Lixa Oromiyaatti akka bobba’uuf jedhan himamaa jira.
Biyya kana keessatti kan humna qabu, kan dirqama nageenya eegsisuu qabu mootummaadha. Qaamni wal dhabdee kana furuuf ergame maaliif mootummaarraa dura hin fixne?
Qaamni kun gara Lixa Oromiyaatti ergamuun yeroo lammaffaadha. Kan duraatiin maaltu ta’e? Furmaanni kaa’ame maali? Ammas marsaa lammaffaa erguun maaliif barbaachise?
Waraanni Bilisummaa Oromoo bakka duraan ture jira; socho’ee dhiibbaa hin goone; homaa hin weerarre. Kan daangaa Ertiraarraafi kaampii waraanaa adda addaarraa xayyaaraafi konkolaataan gara Waraanni Bilisummaa Oromoo jirutti bobbaafamee lola bane waraana mootummaadha. Waraanni Mootummaa akka lola kana dhaabu maaliif hin goone?
Waraanni Bilisummaa Oromoo jaarmiyaa of danda’e tokko miti. Qaama Adda Bilisummaa Oromooti. Hogganni Waraana Bilisummaa Oromoo waliigalaa Finfinnee walakkaa jira. Maaliif waraana mariisisuun barbaachise?
Ammas jaarsolii biyyaa, Abbootiin Gadaa fi abbootiin amantaa fedhii mootummaa guutuuf jiraatumoo fedhii uummataa guutuu?
Maaliif mootummaafi ABO waliin taa’anii hin mari’atiin?
“Gujii lixaa Aanaa Dugda Daawwaatti Raayyaan Ittisa Biyyaa magaala keessatti uummata nagaa kan Mana isaa taa’uu raasasaan haleellee ammatti duuti 11 ga’eera.Mana seenaa,Kiliinika keessa seenaa ,Mootora irratti ajjeesanii Mootora waliinis nama gubanii jiru.Manas gubanii,mootora yoo xiqqaaye 20n oli gubanii jiru.Halkan waan ta’eef reeffi hin argaminis jira.Poolisiin Oromiyaas lama ajjeesanii jiru.”
Muddee 28,2018) Godina #Gujii_Lixaa, magaalaa #Fincaawaa tti guyyaa har’aa naannoo sa’aa 10nin duuba rakkoo guddaan uumamuu fi namootni 15 ajjeefamuun gabaasamaa jira.
Manneenii fi doqdoqqeen ummataa mancawuunis kunoo mul’ateera.
Magaalaa Fincawaatti lubbuun Oromoota hagasii akkamitti ba’e? Sababaan isaa hoo maali? Kan ummata kana fixe eenyu?
Odeeffannoon boodana naannoo san irraa ba’aa jiru ilmaan Oromoo kana itti dhukaasee kan fixe waraana EPRDF tahuu hubachiisa.
BURRAAYYUU:Magaalaa Burraayyuutti Maqaa Abbaa Qabeenyaa Takilabirahaan Ambaayeen dalla’amee fi waggoota 5’nan darbaniif miseensoota raayyaa ittiisa biyyaatiin eeggamaa kan ture,